အဆင့် - ကိန်းဘရစ်ချ်ကျောင်းသားများသည်ဘာသာရပ်ပေါ် မူတည်၍ သူတို့၏ဖုန်းများပေါ်တွင်သုံးစွဲရန်အချိန်မည်မျှရှိသည် - ဤသည်ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
အဆင့် - ဒီနေရာမှာကင်းဘရစ်ကျောင်းသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုဘယ်လောက်သုံးတယ်ဆိုတာဒီမှာပါ
လူတိုင်းရဲ့ဖုန်းများမှတဆင့် nosing ကိုချစ်ရဲ့ရိုးသားကြပါစို့။
screen time function စတင်မိတ်ဆက်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖုန်းများပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းသောအချိန်ပမာဏကိုအလွန်အမင်းသိသာထင်ရှားစေသည်။ ကြည့်ဖို့စပ်စုကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားတရားမဲ့မျက်နှာပြင်သည်အချိန်အလွန်များလွန်း။ အဆက်အသွယ်နာရီမရှိခြင်းဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်သုံးလနှင့်သုံးလအကြားဆက်စပ်မှုကိုစုံစမ်းရန်ဘာသာရပ် ၁၀ ခုမှကင်းဘရစ်ကျောင်းသား ၁၀ ယောက်ကိုဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေပါသလား။ (ဓာတ်ပုံ Credit: ကေတီ Thacker)
ကောင်းမွန်သောစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးသတင်းထောက်များနည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်လူ (၁၀ ယောက်) နှင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်သေချာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ဟုတ်တယ် မည်သည့်ဘာသာရပ်သည်၎င်းတို့၏ဖုန်းများတွင်စွဲလမ်းမှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ရန်ကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေး (Covid ကိုကျေးဇူးတင်) ။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့အားမယုံနိုင်လောက်အောင်နည်းပညာ၊ သိပ္ပံနည်းကျအမျိုးအစားများကိုအဆင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ၄ ​​င်းတို့၏ဘွဲ့နှင့်ပတ်သက်သောကတိက ၀ တ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ဖုတ်ကောင်များဖြစ်နိုင်ခြေစသည့်အချက်များဖြစ်သည်။ ကင်းဘရစ်စစ်မှန်တဲ့ပုံစံမှာဒီဟာတွေဟာစာသားအတိုင်းပဲအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်သူတို့၏ဘာသာရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏စိတ်စွန်းကွက်ခြင်းများဖြစ်သည်။
ရလဒ်ကဘာလဲ ဒီခိုင်မာတဲ့စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးသတင်းစာပညာကကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးသားအဆင့်အသိအမှတ်ပြုမှုရစေမလား။ နေ့တိုင်းငါတို့ဖုန်းတွေမှာ ၆ နာရီကျော်အချိန်ဖြုန်းနေသလား။
၁။ သမိုင်း - ၁၁ နာရီ ၄၁ မိနစ်
သမိုင်းတွင်လတ်ဆတ်သော Kailan မှ ၁၁ နာရီနှင့် ၄၁ မီတာအကွာအဝေးတွင်အမှန်တကယ်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောဆု (Photo Credit: Kailan)
အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်အောင် ၁၁ နာရီနှင့် ၄၁ မိနစ်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သမိုင်း ၀ င်များသည်ထိပ်ဆုံးနေရာကိုရယူရန်အတွက်ရပ်နားလိုက်သည်။ ပိုလတ်ဆတ်သောသမိုင်းကြောင်း Kailan သည်အနိုင်ရလိုခြင်းမရှိသောပြိုင်ပွဲတွင်ပထမနေရာကိုရခြင်းအတွက်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းပြီးအပြစ်ရှိသည်ဟုခံစားရသည်။
သူ၏ကာကွယ်ရေးတွင်ဆောင်းပါးအတွက်အသုံးပြုသောမျက်နှာပြင်ကိုအားလပ်ရက်များအတွင်းရိုက်ယူခဲ့သည်။ စတင်သည့်အချိန်ကတည်းက၎င်းသည်တစ်နေ့လျှင် ၅ နာရီခန့်အထိသိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီးထိပ်ဆုံး ၅ သို့ရောက်ရန်မလွယ်ကူပါ။
ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင် Kailan သည်သူ၏ iPad ပေါ်တွင်မှတ်စုများကိုယူပြီးယနေ့ရက်သတ္တပတ်တွင် Notability ကိုနာရီ ၂၀ ကျော်တက်ခဲ့ပြီးအွန်လိုင်းကိုလုံးဝသင်ကြားခြင်းဖြင့်သူ၏ဖန်သားပြင်ကို အသုံးပြု၍ ဤမျှလောက်အချိန်ဖြုန်းနေသည်ကိုအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
သူ၏ဖန်သားပြင်ကန့်သတ်ချက်များသည်အလုပ်မဖြစ်ဟုသူကမေးသည်၊ သူကဖန်သားပြင်ကန့်သတ်ချက်များသည်ဘာမျှမလုပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အများစုလိုသူကသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုပြီးအချိန်ပိုကိုနှိပ်ပါ။ သူဟာတစ်ပတ်လုံးဖုန်းမပါဘဲလုံးဝမသွားနိုင်ကြောင်းထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 9/10 (အကယ်၍ Kailan ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆိုတာမသိရင်ငါသံသယတွေရှိလိမ့်မယ်)
၂) HSPS ၁၁ နာရီ ၂၃ မိနစ်
ဒုတိယနေရာတွင်အားလပ်ရက်များ၌ Ell သည် HSPS ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင် ၁၁ နာရီနှင့် ၂၃ မိနစ်မျှဖုန်းပြောခဲ့သည်။ သို့သော် Kailan ကဲ့သို့ပင်သူမယခုအခေါ်အဝေါ်စတင်ပြီ၊ သူမ၏ဖုန်းမျက်နှာပြင်အချိန်သည်သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီးသူမသည်တစ်နေ့လျှင် ၄ နာရီခန့်သာသုံးစွဲကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုအာမခံသည်။
သူမမှာသူမမှာအချိန်များစွာရှိခဲ့ပြီး uni မှလူများနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့်သူမသည်အလွန်အဆင့်သတ်မှတ်ခံရခြင်းကိုမအံ့သြကြောင်းပြောသည်။
အွန်လိုင်းအသုံးအနှုန်းဖြင့်အဲလ်ကသူမသည်သူမ၏ဖန်သားပြင်အချိန်ကို ပို၍ သတိထားမိလာသည်ဟုပြောပြီးနေ့ခင်းဘက်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင်သူမ၏ဖုန်းကိုပိတ်ထားသည်။
ဖုန်းအဆင့်သို့အပ်နှံခြင်း ၈/၁၀ (၁၁ နာရီခန့်သည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသော်လည်းဖုန်းကိုအလုပ်မလုပ်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုသည်)
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ၄/၁၀
၃။ သမိုင်းနှင့်ခေတ်သစ်ဘာသာစကားများ - ၈ နာရီ ၄၇ မိနစ်
Abby သည်ရှားပါးသည့်အချိန်တွင်သူမ၏ဖုန်းသည်ဂရမ် (သို့) ဓာတ်ပုံကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းမရှိပဲ (Photo Credit: Abby)
Abby, HML ကျောင်းသားတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင်သူမ၏ဖုန်းတွင် ၈ နာရီ ၄၇ မီတာသုံးစွဲခဲ့သည်နှင့်အတူ TikTok ကိုသူတို့အများဆုံးအသုံးချ app တစ်ခုအဖြစ်ရရှိခဲ့သည်။
အက်ဘီကသူသည်တစ်ရက်သာအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာအသုံးပြုနိုင်လျှင်၎င်းသည် Spotify ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမကခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများအရသိပ္ပံကျောင်းသားများသည်ဖန်သားပြင်အချိန်ပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ (Abby သူမဖတ်သည့်အခါအံ့သြစရာဖြစ်လိမ့်မယ်!)
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ၈/၁၀ (သင် TikTok ယုန်တွင်းထဲသို့ရောက်သောအခါအနည်းငယ်သာသင့်ကိုကယ်တင်နိုင်သည်)
၄) MML ၆ နာရီ ၅၄ မိနစ်
အဲလက်စ်၏အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောဖန်သားပြင်အချိန်သည် Insta ကိုဂုဏ်ယူသည် (ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် - အဲလက်စ်)
အလွယ်တကူအာရုံပျံ့လွင့်စေနိုင်သောဘာသာဗေဒပညာရှင်အဲလက်စ်သည်ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်အဆင့် ၄ တွင်ရှိသည်။
အဲလက်စ်ကသူ၏ဖုန်းသည်အဆင်မပြေသောအချိန်များတွင်ရောက်ရှိနေသောအရာများဖြစ်သည်၊ သို့သော်အွန်လိုင်းအသုံးအနှုန်းကိုစတင်ကတည်းကသူတို့သည်အာရုံစူးစိုက်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ရန် Instagram နှင့် TikTok နှစ်ခုလုံးကိုဖျက်ပစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီလိုလုပ်တာကတည်းကသူပျော်မွေ့ခြင်းအတွက်ပိုမိုစာဖတ်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့ပြီး၊ Snapchat (လူမှုမီဒီယာများ၏ဘေးအန္တရာယ်များ) တွင်မျက်နှာပြင်ပြတ်သွားသည်။
ဒီဂရီအဆင့်အထိအပ်နှံခြင်း ၅/၁၀ (လွယ်လွယ်ကူကူနှင့်အာရုံပျံ့လွင့်နိုင်သည်? မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သောအသုံးအနှုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးရောနှောခြင်းမဟုတ်ပါ)
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ၃/၁၀
၅။ သမိုင်းနှင့်နိုင်ငံရေး - ၆ နာရီ ၁၈ မိနစ်
Sighs တံတားအောက်မှာတောင်မှမထိုးတာကငါ့ဖုန်းကိုချွတ်လိုက်တယ်။ (Photo Credit: Author's Own)
တဦးတည်းသစ်ပင်ကုန်းပေါ်မှာ Pete wentz
နောက်တခုကတော့တွေ့ရခဲတဲ့ HisPols ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ (ဒီဆောင်းပါးကိုရေးနေတုန်းမှာမိနစ် ၂၀ ကျော်သွားတဲ့ပျမ်းမျှ)
ပျမ်းမျှတစ်နေ့ ၆ နာရီ ၁၈ မိနစ်၊ ဇန်နဝါရီလအများစုအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းကိုပိတ်ထားသော်လည်း Netflix၊ လူမှုမီဒီယာနှင့်အလုပ်များများများအလွယ်တကူဖြစ်သွားနိုင်သည်။ WhatsApp တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အုပ်စုဖွဲ့စကားပြောမှုများနှင့်ဖုန်းဆက်သွယ်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်ဖုန်းဆက်သွယ်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ရရှိရန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
ဖုန်းအဆင့်သို့အပ်နှံခြင်း ၇/၁၀ (မစွဲလမ်း)
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 8/10 (ငါသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်)
၆။ ဆေးပညာ - ၄ နာရီ ၅၀ မိနစ်
ဖန်သားပြင်အချိန်ကာတွန်း။ #SaturdayMotivation # lockdown2021 #screentime #အပြင်မထွက်ခိုင်းခြင်း # ကာတွန်း က #stokoecartoons ပုဂ္ဂလိကမျက်လုံးမှဖြစ်သည် pic.twitter.com/ujIHMwakVg
- စတုတ်ကာတွန်း (@mikestokoe) ဇန်နဝါရီလ 23, 2021
စာရင်းသို့ရောက်ရှိရန်ပထမဆုံးသိပ္ပံဘာသာရပ်ကိုပြန်လည်ရေးဆွဲသည့် Ewan သည်ဆေးသမားတစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင် ၄ မိနစ် ၅၀ သာမန်လူတန်းစားကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ယူနန်သည်သာမာန်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကုန်ဆုံးသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်ဟုသူကပြောသည်။
ဒီဂရီအဆင့်အထိအပ်နှံခြင်း ၉/၁၀ (အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစေ၊ ဆေးပညာနှင့် ၀ န်ကြီးများသည်တစ်ခုတည်းသောဘွဲ့ဒီဂရီများသာဖြစ်သည်)
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 10/10 (၎င်းကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားဖြစ်နိုင်သည်)
၇။ သဘာဝသိပ္ပံ ၃ နာရီ ၄၃ မိနစ်
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပြုမိသော NatSci Minnie ကသူမ၏မှတ်ချက်များကို (NatScis သည် NatScis ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှက်ရွံ့နေသော) သူမ၏မှတ်ချက်များကို deNatSci မှပြောရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူမတိုက်ရိုက်ကိုးကားခြင်းမပြုရန်အကောင်းဆုံးဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ခဲ့သည် (JK, Minnie သည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်သည်) ။
NatScis ကိုကိုယ်စားပြုပြီးနံပါတ် ၇ နေရာတွင်သာရှိသည်။ Minnie သည်တစ်နေ့လျှင်သူမ၏ဖုန်းတွင် ၃၃ နာရီ ၄၃ မီတာခန့်သုံးစွဲခဲ့သည်။ သူမတစ်နေ့တာအတွက်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုသာရရှိနိုင်လျှင် Instagram နှင့် Snapchat အကြားကွဲလွဲမှုရှိသည်။ MinnSie သည်လူမှုရေးဆန့်ကျင်ရေးသတ္တဝါများဖြစ်သည်ဟူသောအသွင်သဏ္vingာန်ကိုသက်သေထူရန်အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်ကိုလုပ်သည်။ ကျိန်းသေ Instagram ကိုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖုန်းအဆင့်အထိအပျနှံခြင်း : ၆/၁၀
ဒီဂရီအဆင့်အထိအပ်နှံခြင်း 7/10 (Minnie သည်သူမအလုပ်ကိုနံနက်ခင်း၌လုပ်သောအချက်ကိုငါသိ၏)
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ၂/၁၀
၈။ အင်ဂျင်နီယာ - ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ်
3hr 40m သည်ဤစာရင်းရှိပျမ်းမျှမျက်နှာပြင်၏ထက် ၀ က်နီးပါးရှိသည်ဟုစဉ်းစားရန်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။
Perry ကသူမနက်မှာသူလုပ်ခဲ့တာကအရေးကြီးတဲ့မက်ဆေ့ခ်ျတွေ၊ ပြီးတော့ငါလူမှုမီဒီယာကိုသွား။ (Outlook သည် gateway app ဖြစ်သည်ကိုလူသိများသည်)
ဤအသုံးအနှုန်းကိုနေအိမ်မှအလုပ်လုပ်ကိုင်သောနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ပယ်ရီက၎င်းသည်ပြီးခဲ့သည့်သက်တမ်းထက် ပိုမို၍ ခက်ခဲကြောင်း၊ သူ၏ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်ပြောဆိုရန်သူ၏ဖုန်းတွင်ရှိရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီဂရီအဆင့်အထိအပ်နှံခြင်း 8/10 (သင်၏အီးမေးလ်များကိုပထမ ဦး စွာစစ်ဆေးခြင်းသည်အထူးပြုလုပ်ထားသည်)
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 3/10 (ဒါပေမယ့်သူကအဖိုးအခ 9/10 င်, Facebook ပေါ်မှာ 11hr မုသာမသုံးပါ) ။
၉။ အနုပညာသမိုင်း - ၂ နာရီ
၎င်းကိုတစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ ၅ နာရီအောက်သာပြုလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောလူသားဖြစ်သော်လည်းမည်သူမဆိုအမှန်တကယ်အံ့အားသင့်နေပါသလော။
အနုပညာကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Poppy ကသူမသည်သူမ၏လူမှုရေးအားလုံးကို iPad သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီးမျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုကိုဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၃ နာရီ ၃၁ မိနစ်မှ ၂ နာရီသို့၎င်းကိုငါရနိုင်ခဲ့သည်။ ဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့်ကြည့်ရတာမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၊
သူတို့ကဖုတ်ကောင်တစ် ဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် 1/10 (အနုပညာသမိုင်းသည်ကျောင်းသားများသည်ဖုတ်ကောင်များလွန်းလှသည်ဟုခံစားရသည်)
၉။ စီးပွားရေး - ၁ နာရီ ၂၄ မိနစ်
ဝေးလံသောနောက်ဆုံးမှတက်လာ, ငါတို့စီးပွားရေးကိုကိုယ်စားပြုအာဒံကိုရှိသည်။ (ဓာတ်ပုံ Credit: Adam)
ဘောဂဗေဒအသစ်လတ်ဆတ်သောအိုလံပစ်ချုပ်နှောင်မှုအာဒံ၏တေးဂီတတစ်ခုတွင်တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီ ၂၄ မိနစ်ခန့်စုစုပေါင်းစီးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာပြင်ကန့်သတ်ချက်ကို ၂ နာရီထားရှိပြီး၎င်းကိုမထားရှိပါ။
ဘာကြောင့် c စကားလုံးကအရမ်းဆိုးတာလဲ
သူကအနိမ့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ခံရတာကိုအံ့အားသင့်ခဲ့သလားလို့မေးခဲ့တယ်အာဒံကသူက defo [sic] ကိုအံ့အားသင့်မိပြီးသူ့ဖန်သားပြင်အချိန်ကတော်တော်များများလို့ထင်ခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ (ငါ့ကို ၆ နာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာမသေချာဘူး) ။
တယ်လီဖုန်းအဆင့်သို့အပ်နှံခြင်း - ၂.၂/၁၀ (ဤသည်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတစ်ကြိမ်တည်းသာမဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အထူးစွဲမှတ်မိသည်)
ဒီဂရီအဆင့်အထိအပ်နှံခြင်း - ၈/၁၀
သူတို့သည်ဖုတ်ကောင်များဖြစ်နေသည်ဟုအခွင့်အလမ်းများသည်။ : 10/10 (ကျွန်ုပ်သည် Snapchat အပေါ်တစ်ပတ်လျှင် ၁ နာရီအသုံးပြုသောတစ်စုံတစ် ဦး ကိုမယုံကြည်နိုင်ပါ) ။
၎င်းကိုကျော်လွှားနိုင်ခြင်းအတွက်သင့်ကိုဆုချရန်နှင့်သင်၏မျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည့်လေးလံသောဂရပ်တစ်ခု။ (ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် - စာရေးသူပိုင်ရှင်)
ပြီးတော့အဲဒီမှာမင်းမှာရှိတာပေါ့၊ ကိန်းဘရစ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ကိန်းဘရစ်ဘာသာရပ်တွေကိုမျက်နှာပြင်အသုံးပြုမှုနည်းနည်းလေးလေ့လာတာ။ ငါမျက်နှာပြင်အချိန်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ငါဖြုန်းငါ့ဘဝ၏ဘယ်လောက်သဘောပေါက်မှရတယ်နှလုံးရောဂါအပြင်, ငါရလဒ်များအားဖြင့်လွန်ကဲကဲအံ့အားသင့်ခဲ့ပါဘူး။
ဒါကဖုန်းစွဲနေတဲ့လူ့ဘောင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်လား၊ ဒါမှမဟုတ်လူသားတွေဟာအစစ်အမှန်ဘာသာရပ်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါရလဒ်ကိုပိုက်ဆံသွင်းမယ်ဆိုရင်ငါကလူသားတွေရဲ့ဇယားကိုကျော်လိမ့်မယ်မှန်း '' တကယ်ကိုအရာအားလုံးမှာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့တုန်လှုပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကတော့အတော်အတန်ရင်းနှီးတဲ့လူတွေ (မင်းကိုကြည့်နေတဲ့အာဒံကိုကြည့်ခြင်း) ဟာသူတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာအချိန်သိပ်မကုန်နိုင်ဘူးဆိုတာပါ။
Cover image ပုံ - Rosie Smart-Knight
အဆင့် - အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - Covid ချိုးဖောက်မှုများအများဆုံးရှိတဲ့ Cambridge တက္ကသိုလ်များ
•ဤဥပစာစကားလုံးသည်သင်၏အွန်လိုင်းသင်ကြားမှုကို SPICE UP နည်းလမ်းခြောက်ခု
•ကင်းဘရစ်ဘွဲ့နှင့်ယခုဘွဲ့ - သင်္ချာဘဝ၏နေ့